Amazwi kaJanuwari | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokuphazima kweso, sithola inyanga yokuqala yonyaka. Kuyikhasi elingenalutho esizoligcwalisa ngemibono, amathemba nangeqhwa, iqhwa eliningi. Ziyizinsuku ezibandayo kakhulu kwezinye izingxenye zeSpain, lapho izihlahla zibonakala zingaphili khona futhi amasimu aphaphathekile ubusuku nobusuku. Lezi zimo ziyaphindwa minyaka yonke, ukuze zibonakale kufayela le- amazwi kaJanuwari.
Abalimi bakhetha ukuhlala emakhaya kunokusebenza ezingadini zabo, ngoba amazinga okushisa angaba phansi kakhulu kangangokuba noma ngubani aphume ahambe. UJanuwari ngakho-ke angaba yinyanga engenzi lutho kithina esihlala ezifundeni ezipholile zaseNyakatho Nenkabazwe, kepha ziyizinsuku ezinhle kakhulu kulabo abathanda imidlalo yeqhwa.
1 Sinjani isimo sezulu ngoJanuwari eSpain?
2 Amazwi kaJanuwari
Sinjani isimo sezulu ngoJanuwari eSpain?
ESpain lena yinyanga leyo imvamisa kuyabanda, ikakhulukazi ezindaweni ezisenyakatho neziphakathi nezwe. La Izinga lokushisa elijwayelekile lingu-7,2ºC, enama-maximum angama-30ºC eziqhingini zaseCanarian kanye nokuncane okungu -8ºC kwezinye izingxenye zengaphakathi leNhlonhlo Yase-Iberia.
Uma sikhuluma ngemvula, imvamisa iba yinyanga enomswakama ojwayelekile, ibe nesilinganiso esingu-63mm. Imiphakathi lapho imvula ingena kakhulu imvamisa iGalicia, i-Asturias, iCastilla y León, ngoba imingcele ivame ukungena isuka enyakatho-ntshonalanga yenhlonhlo nalapho ifinyelela eningizimu naseningizimu-mpumalanga yenhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic igqoke kakhulu. E-Canary Islands imvamisa kuyinyanga emanzi isiyonke.
Kepha, ake sibone ukuthi zithini izisho.
Elangeni ngaphandle kwesigqoko noma ngo-Agasti noma ngoJanuwari: Kulula ukucabanga ukuthi ebusika imisebe ye-ultraviolet ayinakusilimaza njengasehlobo, kepha lokho kuyiphutha. Ngalesi sikhathi ilanga lisalimaza ngendlela efanayo, ngoba noma liphansi emkhathizwe lingadala ukubonakaliswa okukhulu, yingakho kubaluleke kakhulu ukuvikela amehlo akho kanye nekhanda lakho.
NgoJanuwari isikhafu, ikapa nesigqoko: Futhi akukho okushodayo! Kuyabanda ezingxenyeni eziningi zezwe kangangokuthi into yokugcina okufanele uyenze ukuphuma ngaphandle ugqoke izingubo ezilula. Noma ngabe kubanda kakhulu noma ubanda, gqoka izingubo ezishisayo uma kunesidingo.
Ngikufanisa nenyanga kaJanuwari, okuyiyona ecace bha onyakeni wonke: isibhakabhaka siyacwengeka ngemuva kwezimvula ngoDisemba, ngakho-ke isathelayithi yethu ibukeka imangalisa ukwedlula phakathi nonyaka wonke.
NgoJanuwari amanzi ayajiya embizeni nesalukazi embhedeni: amazinga okushisa aphansi angaba yinkinga enkulu, ngaphandle kokukwazi ukupheka ngokunethezeka futhi / noma ukuqhaqhazela imizuzu engama-30 noma ngaphezulu kuze kufike ukufudumala kombhede futhi kusivumele ukuthi silale.
Januwari, inyanga enhle ye-chickadeeYebo, manje ngama-brazier kagesi, ama-radiator namanye amadivayisi okushisa, amalahle awasetshenziswa kakhulu ekhaya, kodwa uma uzochitha usuku ezweni, ukubasa umlilo omuhle kuyikhambi elihle kakhulu lamakhaza; noma kunjalo, ngaso sonke isikhathi kufanele ubase umlilo ezindaweni ezivunyelwe futhi ulawulwe ngaso sonke isikhathi ukugwema izinkinga.
UJanuwari ungumnumzane omuhle uma engaphenduki umshayi womoya: Kuyabanda, yebo, kepha ngezinsuku lapho umoya ungavunguzi singabathatha, yize iningi lethu kufanele ligqoke izingubo ezifudumele.
UJanuwari unezinye amahora ezimbalwa ngokuphelele; Noma ngubani ofuna ngempela ukubala, ihora nesigamu kufanele amphonse phakathi: kusukela ku-solstice yasebusika (Disemba 21) izinsuku ziqala kancane kancane ukuthi zibe zinde, kepha asikwazi ukukuqonda kuze kufike uJanuwari.
NgeSan Antón de Enero, i-trajinero ihamba ihora elilodwa ngaphezuluUsuku lukaSanta nguJanuwari 16. Ngaleso sikhathi, usuku seluthole ukude.
Uma uJanuwari elahlekile, yibheke ngesihlahla se-alimondi: isihlahla se-alimondi isihlahla sezithelo ebusika esingenamaqabunga, kepha ngoJanuwari siqala ukuphuma ekuphumuleni kwaso kobusuku, into esiyikhombisa ngokuqhakaza.
KwakunguFebhuwari njalo ngenye indlela ezungeze uJanuwari: Uyisiphi isizathu! Uma uMasingana lina, maningi amathuba okuthi uFebhuwari uzomisa, ngakho-ke singabheka izinto ezenzeka ngenyanga yokuqala yonyaka ukubikezela okuzokwenzeka ngenyanga kaFebhuwari.
ICold January ingena ishaya iminwe: kubanda kakhulu kwabanye, kubandakanya nami, kunguJanuwari. Lapho sizwa ukushisa okuphansi kunalokho ebesingathanda, esikufisa kakhulu ukuzivikela emakhazeni ngokushesha.
Kubanda futhi kuthule ngoJanuwari, kuvula unyaka omuhle: naphezu kwakho konke, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi inyanga ngayinye yonyaka ibe nezici zayo zezulu, njengoba kusho ukuthi konke kuhamba kahle. Uma uJanuwari eqala ukubanda futhi ezolile kancane, kuphelele.
Zikhona ezinye izisho zesimo sezulu ozaziyo zangoJanuwari?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amazwi kaJanuwari
Ilukuluku lasebusika elizokumangaza
Ividiyo eshaqisayo ikhombisa konke ukuzamazama komhlaba kweminyaka eyi-15 edlule